विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयका ‘वेद गुरु’
नेपालमा सम्भव छ त ? अब के गर्ने ? तनहुँका सञ्जन पिया, पोखराका निर्देश द्वा र काठमाडौंका सुजित पाठक घोत्लिए । अवसरको खोजीमा युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो थियो । उनीहरूको मनमा पनि विदेश जाने सोच नआएको होइन । तर ‘वेद गुरु’ले विदेश जाने उनीहरूको सपनालाई यू–टर्न गरायो ।
पिया र द्वाले कम्युटर इन्जिनियरिङ पनि सकाए । उनीहरू एउटै कलेजका साथी । पढिसकेपछि प्राइभेट कम्पनीमा काम सुरू गरे । त्यहीँ भेट भएको हो सुजितसँग । सुजितले पनि कम्युटर साइन्स नै पढेका थिए । उनीहरूको भेट बाक्लिँदै गयो । अरूको काम गर्ने होइन । आफैँ ‘जब क्रिएट’ गर्ने हो । तीन भाइले निर्णय गरे । अनि बजारमा रिसर्चका लागि निस्किए । अब के गर्ने ? नयाँ आइडिया के छ ? रिसर्चकै क्रममा उनीहरू स्कुल–स्कुलमा पुगे ।
स्कुलको प्रमुख समस्या अभिभावक र स्कुलबीच ‘कम्युनिकेसन’ नहुने पत्ता पाए । यी दुईबीचको पुल कसरी बन्ने ? स्कुल र अभिभावकबीच कम्युनिकेसन कसरी गराउने ? अनि आइडिया निकाल्न थाले । अन्तत: आइडिया निस्कियो ‘एप’को माध्यमबाट स्कुल, अभिभावक र विद्यार्थीलाई जोड्ने । त्यहीँबाट जन्मिएको हो ‘वेद गुरु’ ।
के हो वेद गुरु ?
वेद संस्कृत शब्द । जसको अर्थ हुन्छ ‘ज्ञान’ । स्कुल ज्ञानको भण्डार । त्यसैले विद्यार्थी, अभिभावक र स्कुलबीच ज्ञान आदानप्रदान गर्ने माध्यमका रूपमा नाम ‘वेद गुरु’ राखिएको हो । वेद स्कुल म्यानेजमेन्ट गर्ने सफ्टवेयर हो । मन्टेश्वरी, स्कुल र कलेजमा जति पनि काम हुन्छ, त्यसलाई म्यानेज गर्ने सिस्टम हो ।
‘सुरूमा अभिभावक र विद्यालयबीच कम्युनिकेसन गरउने माध्यम बनाएका थियौँ,’ संस्थापक द्वा भन्छन्, ‘विद्यालयको माग बढ्दै गयो, अनि नयाँनयाँ फिचर्स थप्दै गयौँ । ’
वेदले के काम गर्छ ?
आफ्नो बच्चा समयमा स्कुल पुग्यो कि पुगेन ? घर किन ढिला आयो ? कतै जाममा परेको त छैन ? केही समस्यामा फसेको त होइन ? शिक्षकले होमवर्क दिएको छ कि छैन ? होमर्क गर्यो कि गरेन ? बच्चाले स्कुलमा कस्तो पढिरहेको छ ? फि तिर्ने बेला कहिले हो ? तिर्न कति बाँकी छ ? जहाँ हो, त्यहीँबाट मोबाइल वा वेबबाट अभिभावकले हेर्न सक्छन् । शिक्षक र स्कुल प्रशासनसँग अभिभावकले कुरा गर्न सक्छन् ।
स्कुलमा कति विद्यार्थी आए ? को को विद्यार्थी एप्सन भए ? किन आएनन् ? के कारणले विद्यार्थी स्कुल आएन ? विद्यार्थीको सम्पूर्ण डाटा विद्यालयले राख्न सक्छ । र, त्यो डाटा अभिभावकलाई तत्काल विद्यालयले पठाउन सक्छ । जुन विद्यार्थी स्कुल आएको छैन, तत्काल अभिभावकको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जान्छ । यसरी स्कुल र अभिभावकबीच कुराकानी हुन्छ । स्कुल जानै पर्दैन । जहाँ हो, त्यहीँ बसेर आफ्नो बच्चाको सम्पूर्ण जानकारी पाउन सकिन्छ ।
‘अभिभावक बच्चाका बारेमा बुझ्न जाने भनेको नै फि तिर्ने बेलामा हो, कि रिजल्ट लिने बेलामा हो । अघिपछि अभिभावक विद्यालयमा जाँदैनन् । कति अभिभावक काममा ब्यस्त भएकाले पनि विद्यालयमा जान पाउँदैनन् । यिनै समस्या निराकरण गर्न वेद एप ल्याएका हौँ,’ अर्का संस्थापक पिया भन्छन् ।
कसरी कम्युनिकेसन आदान प्रदान हुन्छ ?
स्कुल वा कलेजले वेद एप लिन सक्छन् । अथवा आफ्नै स्कुल वा कलेजले मोबाइल एप बनाउन पनि सक्छन् । त्यही एपमा सिस्टम हुन्छ । त्यही सिस्टमबाट अभिभावकले आफ्नो बच्चाको हेर्न चाहेका सबै डाटा हेर्न सक्छन् ।
कहाँ–कहाँ छ ?
अहिले वेद काठमाडौं, पोखरा र बुटवलमा पुगेको छ । केही समयभित्र चितवनलगायत अन्य शहरमा पनि सुरू गर्ने तयारी छ । काठमाडौँमा मात्र २ सयभन्दा बढी स्कुल र कलेजले वेद एपको प्रयोग गरेका छन् ।
किन वेद नै प्रयोग गर्ने ?
‘पाँच वर्षमा २ सय भन्दा बढी स्कुल जोडिनुभएको छ । अहिलेसम्म एउटा स्कुलले हटायो । अरू स्कुलले थप फिचर्ससमेत बढाउन लगाएर प्रयोग गरेका छन् । सेवा राम्रो छ । त्यसैले दिनप्रतिदिन स्कुलको संख्या बढ्दै छ,’ द्वा भन्छन् ।
शिक्षाको विकासका लागि
‘एजुकेसनमा नेपाल पछाडि छ । रटाएर मात्र विद्यार्थीको भविष्य बन्दैन । रटाएर राम्रो नम्बर त आउला । तर, भोलि गरी खान सक्ने हुँदैन । समय सीमित छ,’ पिया भन्छन्, ‘एपको माध्यमबाट ८ घण्टामा गर्ने काम ४ घण्टामा गर्न सकिन्छ । अर्को चार घण्टा शिक्षक र विद्यार्थीले रिसर्च गर्न सक्छन् । एजुकेसनको विकासका लागि हो वेद गुरु ।’
३ जनाबाट सुरू, विद्यालयले नपत्याउँदा....
३ जनाले सुरू गरेको वेदमा अहिले ३० जनाको टिम पुगेको छ । ‘सुरूमा योङस्टार देखेर विद्यालयले पत्याएनन्,’ पिया भन्छन्, ‘स्कुललाई बुझाउन गाह्रो थियो । २ वर्ष गाह्रो पनि भयो । अहिले राखौँला, ६ महिनापछि युरोप अमेरिका भाग्ने होला भन्थे । अहिले हामी खोज्दै जानु पर्दैन, विद्यालयलले नै बोलाउँछन् । स्कुलहरूले हेर्ने नजर नै चेन्ज भएको छ । गर्व लाग्छ ।’
नेपालमै सम्भव छ
नाम दाम कमाऊँ भन्ने सबैलाई हुन्छ । उनीहरूलाई पनि थियो । ‘सुरूका २ वर्ष कठिन भयो,’ द्वा भन्छन्, ‘विद्यालयको मन जित्न समय लाग्यो ।’
तर अहिले स्कुल र अभिभावकबाट राम्रो प्रतिक्रिया आउँदा उनीहरू खुसी छन् । नेपालमै सम्भव छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एप बनाएका छौँ,’ द्वा भन्छन्, ‘धैर्यता र मिहिनेत गर्नुपर्छ । अहिले शहरशहरमा पुगेर स्कुललाई भेला पारेर इभेन्ट पनि गर्ने गरेका छौँ ।’
बच्चा किन घर ढिला आयो भन्ने अभिभावकको चिन्ता र तनाव पनि हटेको छ । ‘गाडी कतै जाममा परे वा बच्चाले खाजा खाए नखाएको पनि तत्काल जानकारी पाइने भएकाले अभिभावक पनि खुसी हुनुहुन्छ,’ पिया भन्छन् ।
अब वेद देशभर
वेदलाई इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा पुर्याउने संस्थापकहरू बताउँछन् । स्कुलको मात्र नभई विद्यार्थीलाई चाहिने सबै कुरा समावेश गर्छौं ।
‘विद्यार्थीको एकेडेमिक मात्र होइन, वृत्ति विकासका लागि प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजी बनाउँछौँ,’ संस्थापक पिया भन्छन्, ‘विद्यालयसँग समन्वय भएको १० दिनमै तयार पार्छौं । टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिए मात्र हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २८, २०७६, १७:१०:००